Fepetra takiana amin'ny Visa any India
India eVisa Fepetra takiana
Ny antsipiriany sy ny fampahalalana rehetra ilainao ho fantatra momba ny takiana amin'ny sary, ny famaritana ny sary ho an'ny eVisa Indiana, ho an'ny Tourism, Business ary Visa ara-pitsaboana ao India Misy sokajy eto.
Ny e-Visa ho an'i India dia azo alaina mora foana raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana sy ny fepetra takiana amin'ny Governemanta India momba izany ianao. Ny iray amin'ireo antontan-taratasy ilaina apetraka amin'ny fangatahana dia kopia malefaka a sary fomba pasipaoro ny endrik'ilay mpitsidika. Ity sarin'ny mpitsidika ity dia takiana amin'ny fampiharana ny e-Visa Indiana rehetra, na inona na inona fangatahanao ny Tourist e-Visa ho an'i India, ny Business e-Visa ho an'i India, ny e-Visa Medical ho an'i India, na ny Medical Attendant e-Visa ho an'i India, izy rehetra dia mitaky anao mampakatra sary endrika pasipaoro amin'ny tarehinao rehefa mangataka azy ireo amin'ny Internet. Ity torolàlana ity dia hanampy anao hamantatra ireo takiana sary Visa any India. Raha vantany vao fantatrao ny takiana sary Visa any India dia afaka mora foana ianao mangataka amin'ny Internet e-Visa Indiana ary izany koa fa tsy mila mitsidika ny masoivoho indiana eo an-toerana mba hahazoana ny e-visa karana.
Ahoana ny fakana sary ny tarehy hahaliana ny takian'ny sary India Visa?
Ireo mpitsidika mangataka ny Visa any India dia mila maka sary amin'ny endrika pasipaoro amin'ny endrik'izy ireo tsindrio amin'ny telefaona iray. Tsy ilaina ny manatona mpaka sary matihanina mba hikitika azy io izay nilaina raha tsy teo amin'ny Internet ny fizotry ny fampiharana ary raha nangataka ilay Visa nentim-paharazana ilay mpitsidika. Fa ho an'ny e-Visa dia azonao atao ny mampakatra sary voatsindry amin'ny telefaona iray raha mbola mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sary Indian Visa. Na izany aza, tsy azonao atao ny manindry ny sarin'ny na scan ny sary izay hita ao amin'ny pasipaoronao ankehitriny. Tsy maintsy mampakatra sary iray hafa amin'ny endrika pasipaoro ianao.
Ny fepetra takiana amin'ny sary Visa any India:
Ny mpitsidika mangataka ny e-Visa karana dia mila maka antoka fa ny sarin-tarehy izay ampakarin'izy ireo ao amin'ny fangatahana Visa dia mahafeno ireto fepetra takiana amin'ny sary Indian Visa manaraka ireto:
Mila endrika pasipaoro ny sary.
Mila mazava ny sary fa tsy manjavozavo ary tokony hahalala tsara ny mpitsidika amin'ny endrik'izy ireo manontolo sy ny endriny, ny volony ary ny marika rehetra amin'ny hoditra hita amin'ny sary. Raha mitafy satroka, sarondoha, Hijab, burqua, na sarona loha hafa ilay mpitsidika noho ny antony ara-pinoana dia tokony hofarihin'izy ireo fotsiny fa tsy manafina ny tavany, ny saokany ary ny volony ny firakofana. Ny mpitsidika dia tokony ho fantatra mora avy amin'ny sary izay hataon'ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina eo amin'ny sisintany.
Mila farafaharatsiny farafaharatsiny ny sary 350 pixel amin'ny 350 pixel amin'ny haavony sy ny sakany. Mila farafaharatsiny io habe io. Ary ny an'ny mpitsidika tarehy dia tokony handrakotra faritra 50-60% amin'ny sary ary eo afovoan'ny sary. Ny sofina, tendany ary soroka dia tokony ho hita ihany koa raha tsy amin'ny fisaronan'ny loha noho ny antony ara-pivavahana.
ny toerana misy anao Ny haben'ny sary pasipaoro India Visa dia 1 Mb na 1 Megabyte, izay midika fa ny sarin'ny tavanao izay ampakaranao amin'ny fangatahanao Visa any India dia tsy mety mihoatra ny 1 Mb. Azonao atao ny manamarina raha mifanaraka amin'ny haben'ny sary pasipaoro India Visa ny haben'ny sarinao takian'ny fampiharana Visa amin'ny solosainao na ny PC amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny sary, amin'ny fipihana eo amin'ny Properties, ary amin'ny fizahana ny habe ao amin'ny kiheba ankapobeny ao amin'ny varavarankely misokatra izy.
Aza manao kojakoja ilaina toy ny satroka na masoandro mody amin'ny sary. Azonao atao ny manao ny solomaso anao na ny solomaso ao amin'ilay sary nakarinao fa ny tokony ho izy dia tokony mampakatra sary tsy misy azy ireo ianao mba tsy hisy taratra eo amin'ny masonao na tsy hanafina ny masonao ny taratra. Raha tsy izany dia mety angatahina aminao hampakatra ny sary indray ianao ary mety hisy ny fandavana ny fangatahanao raha ny fahalalan'ireo tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina. Fa raha manapa-kevitra ny hitafy solomaso na solomaso ianao dia alao antoka fa tsy misy taratra na taratra amin'izy ireo satria tokony ho hita mazava amin'ny masonao ny masonao.
Ny sary nalaina dia tokony nalaina tao amin'ny Fomban'ny sary fa tsy amin'ny maody Landscape, ny hazavana amin'ny sary dia tokony hitovy ary tsy tokony hisy aloka maizina, ny lokon'ny sary dia tokony ho ara-dalàna raha tsy misy loko miloko, ary tsy tokony hampiasa rindrambaiko fanovana amin'ny sary ianao.
Ny ao ambadiky ny sary dia tokony ho tsotra sy tsotra ary ny akanjo anaovanao amin'ny sary dia tokony ho tsotra ihany koa nefa tsy misy lamina sarotra na loko matevina.
Ny sary dia tsy tokony hisy olon-kafa any aoriana.
Ny fahitana ny endrikao dia tokony ho fijerin'ny frontal, tsy ny fijerin'ny lafy na ny fijerinao ny mombamomba anao, ary ny masonao dia tokony hisokatra tanteraka amin'ny sary, na dia ny antsasaky ny fanidiana azy ary ny vavanao mihidy. Hamarino tsara fa averina averina any aoriana ny volonao ary hita mazava ny endrika rehetra amin'ny tavanao.
Ny kopian'ny malefaka an'ity sary tarehy apetrakao ity dia tokony a JPG, PNG, na fisie PDF.
Raha mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny sary visa any India ireo ianao, ary mahafeno fepetra hafa momba ny fahazoan-dàlana ary koa manana ireo antontan-taratasy ilaina hafa dia mihatra mora foana amin'ny Visa any India izay Forma Fangatahana India Visa dia tsotra sy mahitsy. Tsy tokony hahita olana ianao amin'ny fampiharana sy fahazoana ny Visa any India. Raha, na izany aza, manana fisalasalana bebe kokoa ianao momba ny fepetra takiana amin'ny sary India Visa na ny haben'ny sary pasipaoro India Visa ary mila fanampiana amin'izany ianao na mila fanazavana hafa tokony hataonao. India sy Birao Fanampiana Visa ho fanohanana sy fitarihana.